घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू इसा डाइप बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
LB एक फुटबल जीनियस को पूर्ण कहानी प्रस्तुत गर्दछ जो उपनाम संग प्रसिद्ध छ “Dioppy“। हाम्रो इस्पा ड्यूप चाइल्डहुड स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खातामा ल्याउँछ।
हो, सबैलाई थाहा छ उहाँ एक जबरदस्त एथलीट हुनुहुन्छ, जो एक हावामा उत्कृष्ट छ र जमिनमा छिटो छ। यद्यपि केवल थोरैले इस्का डियोपको जीवनीलाई ध्यान दिन्छन् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
ईसा डियोप बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरू गर्दै, उहाँका पूरा नामहरू छन्; इसा लाय लुकास जीन डियोप। इसा डियोप को रूप मा त्यो लोकप्रिय कहा जाता है जनवरी9के 1997th दिन Toulouse, फ्रांस में अफ्रीकी माता पिता के लिए पैदा हुआ था।
आफ्नो पारिवारिक मूलको बारेमा, ईसामा उत्तर र पश्चिम अफ्रिकी परिवारको जडहरू छन्। उनको पिता सेनेगलबाट भएको बेला उनको आमा मोरक्को हो। यस तथ्यबाट जोगिन, यो कुनै अचम्म छैन कि इसा डियोपले अनुहारको अनुहारबाट देखाएको अरब र पश्चिम अफ़्रीकी दुवैको शुद्ध मिश्रण छ।
टुउलियस शहरमा बढ्दै गएको, सबै इसाई डियोप चाहिएको थियो कि उनीहरूको रेकर्ड तोडने दादाको पालनामा पछ्याउन थालिन्। सबै सेनेगल (पश्चिम अफ्रिका) र फ्रान्समा, डाप पारिवारिक नाम उनको दादा, लिबिया डियोप द्वारा निर्धारित राष्ट्रिय रेकर्डको लागि सधैं सम्झना गरिन्छ।
तपाईंलाई थाहा छ?…, इसा दिओपका हजुरबुबा, लिबासे दीपले हाल फ्रान्सेली लिग १ मा खेल्ने पहिलो सेनेगाली फुटबलरको रुपमा विश्व कीर्तिमान राख्नुभयो।
ईसा डियोप बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
सेनेगल र फ्रान्समा दुवै, डियोप परिवारको लागि उनको सदाको मायालु सम्झना, लिबसेले सम्झनका लागि कठिन थियो।
परिवारको व्यापारलाई निरन्तरता दिनको लागि युवा ईसाले आफ्नो हजुरबाको सपनालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरे। प्रारम्भमा, एक पेशेवर फुटबलर बन्ने उनको दृढ संकल्प केवल एक पारित कल्पना मात्र थिएन।
सुरुमा, ईसा दीपका आमा बुबा आमा आफ्ना बुबाले फुटबल प्रशिक्षणको लागि उसको शिक्षामा सम्झौता गर्दैनन् भनेर सहमत भए। स्कूलमा छँदा पनि, इस्साले प्रतिस्पर्धी फुटबल खेले।
आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षामा मील का पत्थर पुग्दा युवा बालकले आफ्नो सान्त्वना क्षेत्र छोड्ने निर्णय गरे। उनले फुटबल अकादमीको खोजीमा पड़ोसी समुदायको लागि आफ्नो शहर छोडे।
भाग्यवस, ईसाले बाल्मालाई खोजिरहेको कुरा भेट्टाए जस्तो कि स्थानीय क्लबले उनलाई परीक्षणको लागि आमन्त्रित गर्यो।
ईसा डियोप बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
इसा दीपको प्रो बन्ने दृढ संकल्पले उनलाई परीक्षणहरू पार गर्दै बाल्मा स्पोर्टिrol क्लबमा भर्ना भएको देख्यो जसले उसलाई आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्न र क्यारियरको जग बसाल्न अनुमति दियो। यो ईसाले क्लबको साथ एक छाप बनाउन लामो समय लिएन। ऊ सीजनमा केवल अग्लो भएन तर उनी भन्दा बढी खेलाडीहरू विरूद्ध पछाडि बढेको रूपमा द्रुत स्थानमा उक्लियो।
बाल्मा स्पोर्टि Club क्लबका लागि खेल्दा उसको प्रदर्शनको लागि धन्यवाद, टुलूजका भर्तीकर्ताहरूले उनलाई चासो देखाए। क्लबले इस्का डियोपका अभिभावकहरूसँग सम्पर्क बनायो र उसले तुरून्त हस्ताक्षर गर्यो।
Issa Diop Early Life Toulouse मा
ईसा डियोप बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकको प्रसिद्धि कथा
दीओपको क्यारियरको मोड तब आयो जब क्लब फुटबलको साथ उसको निरन्तर प्रदर्शनले उनलाई २०१ 2013 मा फ्रान्सेली यू १ side को पक्षमा खेल्नको लागि बोलाइएको थियो।
तीन वर्षपछि डाईपले युरोपेली ओन-एक्सएनएक्स च्याम्पियनशिपको लागि खेल्न निमन्त्रणा गरेपछि उनीहरूलाई प्रस्तावित सबैभन्दा ठूलो अवसर प्रयोग गरे।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… डियोप फ्रान्सेली पक्षको एक भाग थियो जसले उनको टोलीलाई इटाली 4-0 लाई फाइनलमा पराजित गर्यो र खेलमा अन्तिम गोलको स्कोर गरेपछि ट्राफी हटाइयो।
ईसा डियोप रोड फेम कथा। यूईएफए जित्दै। UEFA लाई क्रेडिट।
लिग १ मा हुँदा, ईस्सा डियोपले प्रति प्रति प्रतियोगिता २.२ अवरोधहरू औसत औसत गर्न शुरू गर्यो। यस उपलब्धीले उनलाई डिभिजनका सर्वश्रेष्ठ खेलाडीहरूमाझ राखिएको होइन तर यूरोपका ठूला क्लबहरूका लागि तीव्र स्थानान्तरण अनुमानको विषय भएको देख्यो।
ईसा डियोप बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
यो WestHam युनाइटेड थियो जसले अन्ततः रिकार्ड पाउन्ड 22 मिलियनमा आफ्नो हस्ताक्षरको लागि दौड जित्यो अघिल्लो रेकर्ड Arnautovic को हस्ताक्षर। पश्चिम ह्यामको लागि खेल्दै, इसा डाइओप अल्फा सेन्टरब्याक भए।6'4' डिफेंडरले व्यावसायिक स्थितीहरूमा विशेष गरी शीर्ष प्राइम लीग टीमहरूको विरुद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्थ्यो।
ईस्सा डायोप फेम कथामा उगियो। ईयू प्राइम टाइम फुटबल, स्पोर्ट्सजेओई र साँझ मानकमा क्रेडिट।
फेरि फेरि ढोका गहन ट्राफिक एसिलेशनको विषय बन्छ जब उनले प्रशंसा पाए Jose Mourinho जसले उहाँलाई "राक्षस"मैनचेस्टर यूनाइटेड विरुद्ध उनको प्रदर्शनको लागि।
द्वारा स्वीकार गरिँदै "विशेष एक"उनको बजार मूल्य बढ्यो, म्यानचेस्टर युनाइटेड र अन्य शीर्ष क्लबहरू बनाउने उनको हस्ताक्षरको लागि बिन्ती गर्दै घुँडामा जान्छ। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
ईसा डियोप बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्ध जीवन
इस्का डियोपको प्रसिद्धिमा वृद्धिसँगै, सबैको ओठमा प्रश्न भएको छ; Issa Diop Girlfriend को हो?... ईसा डियोपको स्वास्नी को हो?...
ईसा डियोप सम्बन्ध जीवन।
त्यहाँ कुनै अस्वाभाविक छ कि उसको गाढा सुन्दर देखिन्छ कि संगै आश्चर्यजनक (f फिट in इन्च) उचाइले उनलाई महिला प्रशंसकहरूको लागि प्यारो दाखको बोट बनाउँदैन।
यद्यपि, डाईप र उनको प्रेमिकाको सम्भव लुकेको रोमांस अवस्थित छ। सायद, जो एक सार्वजनिक आँखाको जाँच मात्र बचाउँछ किनभने उनीहरूको प्रेम जीवन निजी र नाटक-रहित हो। लेखनको समयमा, इसा डियोपले आफ्नो क्यारियरमा ध्यान केन्द्रित गर्न मनपर्छ र उनीहरूको सम्बन्ध जीवनमा कुनै पनि रोचक बानी हटाउन खोजेको छ।
ईसा डियोप बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन
ईसा डियोपको व्यक्तिगत जीवनलाई चिन्नुले तपाईंलाई उसको पूरा तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
सुरूवात, इसाका दयालु व्यक्ति हो जुन जीवनको सबै क्षेत्रमा प्रगति गर्न मन लाग्छ। उहाँसँग आन्तरिक आन्तरिक अवस्था छ जसले उसलाई व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण प्रगति दिन्छ।
Issa Diop आत्म-नियन्त्रण को एक स्वामी हो र यो क्षमता को मार्ग को नेतृत्व न केवल, तर उनको जीवन को बारे मा ठोस र यथार्थवादी योजनाहरु लाई बनाइन्छ। संक्षेपमा, उनीसँग जीवनको व्यावहारिक दृष्टिकोण छ।
ईसा डियोप बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - LifeStyle तथ्यहरू
लेखन को समयमा, Issa Diop को एक नेट वॉर्थ 10 मिलियन यूरो (8.6 मिलियन पौंड) र एक मार्केट वैल्यू 35 मिलियन यूरो (25.9 मिलियन पौंड) छ। यो शाब्दिक अर्थ भनेको लाखपति फुटबलले यसलाई जीवनमा बनाएको छ।
उच्च मूल्यवान हुनुको बावजुद ग्लैमरस जीवनशैलीमा सजिलै सँग मिल्दैन जुन भरखरै आकर्षक विदेशी कारहरू, पैसाहरू, केटीहरू र बजद्वारा देखीन्छ।
उनीहरूको सामाजिक सञ्जाल खाताहरूमार्फत अवलोकन गरिसकेपछि इसामा आफ्ना मोनी र प्रसिद्धि प्रबन्ध गर्ने कुरामा चासो राख्छिन् जसले उनलाई आफ्नो क्यारियरमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ र उनीहरूको जीवनशैली परिवर्तन गर्दैन।
ईसा डियोप बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन
Paparazzi को बावजुद संधै र सामाजिक मीडिया संग जोडने को कई तरिकाहरु मा, यो अबसा को लागि आफ्नो परिवार सार्वजनिक आँखा देखि दूर राखन को लागि आसान छ।
डिओप परिवारबाट बाहिर निस्केको मात्र स्मृति लिग १ मा पहिलो सेनेगाली फुटबलरको रूपमा आफ्नो हजुरबुबाको रेकर्ड अझै छ। उनको भाई, बहिनी, काका वा काकीको बारेमा थोरै मात्र ज्ञात छ। यद्यपि यो निश्चित छ कि सबै परिवारका सदस्यहरू कम कुञ्जी छन् र वर्तमानमा ईसाको क्यारियर सफलताको फाइदाहरूको आनन्द लिन्छन्।
इस्काका आमा बुबाले सेनेगाली वा मोरक्को संस्कृति दुबैको संगै गरेनन् उनको पालनपोषणमा। ऊ अरू अफ्रो-फ्रान्सेली नागरिकहरू जस्तै हुर्केका थिए।
ईसा डियोप बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
तपाईंलाई थाँहा थियो?… लेखन को समयमा, इसामा विश्वभर खेलाडीहरु मा 182 र 59 को प्रमुख लीग को खिलाडियों को बीच, 3rd मा पश्चिम हाम मा खिलाडियों को बीच, 24 मा फ्रान्स मा खिलाडियों को बीच, 25 सबै केन्द्रों को केन्द्र फिर्ता खेलहरु मध्ये 17 र 1997 वर्ष XNUMX।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… यद्यपि इस्साले आफ्नो क्लब टुउलोहाको नेतृत्व लिग 1 मा व्यस्त भए तापनि तिनी अध्ययनका साथ व्यस्त थिए digiSchool bac STMG उनले आफ्नो एसटीएमजी बेक्युरिटी प्राप्त गरे।
Issa Diop Facts। क्रेडिट वायर्ड र Ghanasoccernet.
यो उच्च शिक्षाको लागि सफल उम्मेदवारहरू योग्य गर्न एक परीक्षा हो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… दिन डियोपले आफ्नो प्रिमियर लीगलाई पहिलो पटक आफ्नो पहिलो लिग कैरियरको सुरुवातको लागि एकदमै उदासीन भयो।
यो त्यस्तो थिएन किनकि उसको वेस्टहेम पक्षले आर्सेनलले –-१ ले हरायो। किनभने त्यो खेलमा, डियोपले आफ्नै गोल गर्यो। यस उपलब्धीले उनलाई क्लबको रेकर्डको नकारात्मक अन्तमा देख्यो। ईस्का डियोप पहिलो वेस्ट ह्याम खेलाडी बन्नुभयो जसले प्रिमियर लिगको डेब्यूमा आफ्नै गोल गरे।
ईसा डियोप बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - भिडियो सारांश
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो आईसा डाई बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।